Bilbila dinqii’ iPhone 12 ‘ dubbisaa – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Bilbila dinqii’ iPhone 12 ‘ dubbisaa
Dhaabatni aapil dhaabata gudicha bilbila oomishuun beekama taheedha kan nama dhibu yeroo addaa addaatti dhaabtni kuun waama dinqii gaaffi namatti uumuu gabaaf qabaee as baaha, bara 2020 kessa ‘ iPhone 11’ gabaaf olchee baayyee jalatamaaf bilbila kaameera gurguddaa fi bakkaa kuusaa bal’aa qabatee ture, dhuma bara 2020 jala haaluma walfakkaataan aayiifoon gabaaf dhiyyeesse. Dhiyyeessuun isaani qofti waan dinqi isa hin godhu, garuu kan adda isa godhu bilbila 5G neetiwoorkii dalaguu dandahuu yeroo jalqabaaf gabaaf gumaachuu isaaniti, kana malees kan baayyee na hawwate inni guddaan haardiweer dizaayinii ‘ iPhone 5’ irra jiru deebisuu isaaniti. Dhunfaakooti haardiweer dizaayinii an hedduu jaaladhudha.
Piroosesoori saffisaa A14 baayoonikii, iskiriinii fixee-hanga-fiixee tahee OLED jedhamuun bekamuufi kaameraa 4K tahee kan suuraaf videyoo diniqii waraabuu dandahuu of kessaas qaba. Iskiriinii cimaa ismaartifooniis jedhameera, akksumas bilbila xiqaa isaa irrattis ‘iPhone 12 Mini’ 5G neetiwoorkiif kuusaa odeffannoo isaas isa hangaan guddatu walinis wal qixee godhaniiruu.
Vidiyoo armaan gadii daawwadhaa…
vidiyoo armaan olii irraa waa hubatanittu jedheen yaada, dhaabatni aapil bilbila haaraa kana keessaa (headphones fi charger box) hanbisaniruu sababni isaas guumacha karboonii ozonii irratti dhibbaa fiduu kessatti warshaan waan midhaa qabuuf jecha fayyadamtotni bilbila kana bitatan akka charjeeri duraan qabanitti fayyadaman gorsa.
Dabalatan immoo magSafe kan waan xiqqoo keessa kaahuuf tahu kan humna maagineetitin qabu dandadahuullee waliin gabaaf dhiyeessani jiru.
Egaa warri bilbilli gaarii kun nan darbin jettan na qunamuu dandessu, qarshiin isaa garuu qaalidha!